Korontada raashinka ee dalka oo dhan ayaa nolosha ka dhigtay mid aad u liidata warshado badan oo wax soo saar leh.” Dahab sagaal qalin ah, ayaa had iyo jeer ahaa wax soo saarka amarada ganacsi ee ugu sarreeya. Waqtigaan lama filaan ah "korontadda raashinka", shaki kuma jiro dad badan oo aan diyaarsaneyn. ...
Saddexdii biloodba mar, badeecadaha naqshadaynta cusub ayaa lagula talinayaa macaamiisheena si joogto ah waxaanan u haysanaa shatiyada qaar ka mid ah alaabada muhiimka ah.
(Sharaxaad kooban) Saddexdii biloodba mar, badeecadaha naqshadaynta cusub ayaa lagula talinayaa macaamiisheena si joogto ah waxaanan u haysanaa shatiyada qaar ka mid ah alaabta muhiimka ah. OEM & ODM sidoo kale waa la soo dhaweynayaa. Si diiran u soo dhawoow weydiinta aduunka oo dhan. Tuoda ayaa ku siin doonta tartan...
Alaabtayadu waa badbaadada xidhiidhka cuntada
(Sharaxaad kooban) Alaabtayagu waa badbaadada xidhiidhka cuntada. Tuoda Firmly waxay raacdaa nidaamka ISO9001&ISO14001. Had iyo jeerna samee tababar xiriir la leh shaqaalaheena. Si loo hubiyo in habka wax soo saarka our si waafaqsan heerka tayada sare leh. Intaa waxaa dheer, waxaanu...
Shirkadda NINGBO TUODA PLASTIC CO., LTD. waa soo-saare xirfad leh iyo dhoofiye badeecado caag ah oo tayo sare leh
(Sharaxaad kooban) NINGBO TUODA PLASTIC CO., LTD. waa soosaar xirfad leh oo dhoofisa badeecado caag ah oo tayo sare leh, sida weelka wax lagu karsado, weelka dubista, qalabka jikada, maacuunta, weelka miiska, agabka, iwm oo ay ku jiraan caag saafi ah, Encapsulation, Sili